दसैं टीका कति बजे, कता फर्केर लगाउने, जप्ने मन्त्रको के ? - Samadhan News
समाधान संवाददाता २०७८ असोज २८ गते १५:०२
नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले बडादसैंको टीकाको उत्तम साइत असोज २९ गते शुक्रबार बिहान १० बजेर २ मिनेटमा परेको जनाएको छ । समितिका अनुसार त्यस दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दुर्गाभवानीको प्रसाद लगाउन सकिन्छ । बिहीबार महानवमी पर्व मनाइन्छ । विजयादशमीका दिन बिहान ८ बजेर १९ मिनेटमा घटस्थापनाका दिनदेखि पूजा आराधना गरिएकी देवीलाई विसर्जन गरिने साइत छ ।
हाम्रा मान्यजनहरूले दसैं टीका लगाउँदै संस्कृतिकको श्लोकमार्फत आशिर्वाद त दिन्छन् तर त्यो श्लोकले के भनेको होला भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसमाथि पनि छोरा मान्छेलाई टीका लगाउँदा एकथरी र छोरी मान्छेलाई टिका लगाउँदा अर्कैथरी मन्त्र पढेने गरेको पनि पाउँछौं । यस्तो किन होला भनेर धेरैको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
दसैंको टीका लगाउँदा भनीने मन्त्रको ।
यसकाे अर्थ के ?
जयन्ती : जित्नेवाली
भद्रकाली दक्षप्रजापतीको यज्ञ विनास गर्न सतीदेवीको क्रोधबाट प्रकट भएकी देवी
स्वाहा दक्षप्रजापतीकी छोरी
यस विषयमा कुनै पनि धार्मिक शास्त्र, नीति, पुराण तथा पौराणीक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छैन । यो हामी आफैँले चलाएको चलन मात्र हो । नत्र माथि उल्लेख भएको आयु द्रोण सुते । श्लोकको रचना गर्नुभन्दा पहिले दसंैमा कसैले पनि आशिर्वाद नै पाउँदैन थिए त रु